Madaxweyne Farmaajo Oo Maanta Saxiixay Sharciga la Dagaalanka Musuq-maasuqa. – Awdalmedia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay Sharciga Dhismaha Guddiyada Madaxa-bannaan ee La Dagaallanka Musuqmaasuqa heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay dhibaatada uu musuqmaasuqu ku hayo dowladnimada iyo horumarka dalka, isaga oo xusay in sharcigani uu horseedayo dhismaha Guddiyada Madaxa-bannaan ee La Dagaalanka Musuqmaasuqa, kuwaas oo u xilsaaran ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa.
“Musuqmaasuqu waa cudur kansarka ka daran. Maxaa yeelay kansarku qof qura ayuu dilaa, laakiin musuqmaasuqu bulshada oo dhan ayuu dilaa. Waxaan rajaynaynaa in xubnaha Guddiyadan la soo xulayo ay noqdaan dad ku tilmaaman dhaqan wanaagsan, diin iyo waddaniyad.”
“Dowlad wanaaggu waa wax dowladda laga rabo, waa nagu waajib in aan hagaajinno heerarka kale duwan ee Dowladda. Waa xaqiiq in hal mar aan la wada sixi karin wax walba, maadaama dalku muddo dheer burbursanaa oo ay abuurmeen dhaqanno xun, marka in dhaqankaas iyo hab-fekerka bulshada la beddelo ayaan rabnaa”
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu danbayntii munaasabadda ku saxiixay Sharciga Dhismaha Guddiyada La Dagaalanka Musuqmaasuqa ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed oo ku salaysan qodobka 111-aad ee Dastuurka Kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Mareykanka Oo Ciidamo Difaaca U Diraya Xarumaha Saliida Sacuudiga